क्यारिकेचर गरेको पात्रको रोयल्टी खुत्रुकेमा जम्मा गर्दै कलाकार दिनेश काफ्ले - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
क्यारिकेचर गरेको पात्रको रोयल्टी खुत्रुकेमा जम्मा गर्दै कलाकार दिनेश काफ्ले
१७ मंसिर २०७४, आईतवार १४:०४ 17
काठमाण्डौ मंसिर  १७  ■
पिता पुष्प बहादुर काफ्ले र आमा दिलकुमारी काफ्लेको कोखबाट २०४८ सालमा सिन्धुली बलाजुरमा जन्मेका दिनेश काफ्ले पछिल्लो समय स्टेजमा ब्यस्त हाँस्यकलाकार भित्र पर्छन । बाल्यकाल देखि नै हास्य व्यंग्यमा रुचि राख्ने काफ्लेले काठमाण्डौंमा आएपछि रेडियो अडियोमा कार्यक्रम चलाउने अवसर पाए । यो नै उनको कलालाई निखार्ने र परिस्कृत गर्ने माइलस्टोन मञ्च बन्यो । काफ्ले अहिले नेपालमा सबै भन्दा धेरै व्यक्तिको आवाज नक्कल गर्न सक्ने नेपाली कलाकारका रुपमा परिचत छन ।
स्टेज तताउने क्रममा उनले माग्ने बुढा, धुर्मुस, मुस्कान पासा ,खडका जि, जिग्री ब्रो ,पाडे देखि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको समेत दुरुस्त क्यारीकेचर गर्छन । पछिल्लो समय उनले स्टेज पर्फमेन्स गर्दा जस जसको क्यारेक्टर गर्छन उनिहरुलाई रोयल्टी दिने अभियान सुरु गरेका छन । प्रस्तुत छ यहि बिषयको सेरोफेरोमा रहेर दिनेश संग गरिएको आजको गफ गाफ ।
स्टेजमा प्रस्तुती गरेकोे क्यारेक्टरलाई रोयल्टी दिने सुरुवात किन गर्नु भएको ?
म आफै लोक दोहोरी प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा सिन्धुलीको अध्यक्ष पनि हो । मलाई दिमागमा स्टेजमा गीत संगीत प्रस्तुत गरेको रोयल्टी गीतकार संगीतकारलाई किन नदिएको होला भन्ने लागी रहन्छ । मैले यस बिषयमा दाईहरु संग केन्द्रमा कुराकानी गर्थे । अरुले क्यारिकेचर नगरिदिएको भए मैले पनि केहीगर्न नसक्ने कुरा याद गरेँ । त्यसकारण मै बाट शुरुवात गरौँ क्या रे भन्ने लाग्यो । शुरुवात गर्ने त भने तर तरिका केही थाहा थिएन । त्यस पछि आइडिया लगाए खुत्रुकेको । एउटा खुत्रुके लान्छु त्यसमा क्यारिकेचर र रोयल्टी लेखेर टासेको छु । खुत्रुकेमा स्टेजमा एउटा क्यारिकेचर गरे वापत त्यो क्यारेक्टरलाई दश रुपैया छुटाउँने गर्छु । त्यसरी बक्समा संकलन गरेको सात वटा प्रोग्राम भयो । मैले हाँस्य कलाकारको बढि क्यारिकेचर गर्छु र मूल पात्रका लागि रोयल्टी छुट्याउछु । नेताहरुको पनिक्यारिकेचर त गरिन्छ तर उनीहरुको रोयल्टी भने राखेको छैन ।
नेताको चाँहि किन नगर्नु भएको?
नेताहरु भनेको देशको लागि बाटो देखाउने मान्छे हो तर उहाँहरुले गर्नुभएको छैन । त्यही भएर मैले उहाँहरुको नाममा रोयल्टी गरेको सुहाउँछ जस्तो नि लागेको छैन ।
एक सय दश बाह्र भन्दा बढी आवाज निकाल्नु हुन्छ । एक सय बाह्र जनालाई नै रोयल्टी दिनुपर्यो भने सक्नु हुन्छ कि नाई?
मैले स्टेज मै सबैको क्यारिकेचर गर्दिन किनकी म संग समय पनि हुदैन । स्टेजमा भनेको रुचाईएको आवाजको मात्र क्यारिकेचर गर्ने हो । जो कि सुन्दा मान्छेले बुझेर हाँसोस । स्टेजमा मैले गर्दा गगन थापाको पनि गर्दिन ।
नेपालमा कार्यक्रम गर्दा रोयल्टी दश रुपैया छुटाउनु भयो भने अमेरिकामा कार्यक्रम गर्दा दश डलर छुटाउनु हुन्छ कि नाई?
मैले त्यहाँ गएर माग्ने बूढाको क्यारिकेचर गरेर दश डलर छुटाउनु ठूलो कुरो होईन । हुन त म कोरिया पनि गएर आए त्यो समयमा यो अभियान शुरु भएको थिएन । विदेश गए भने त्यहाँको पैसाको हिसाबले म अवश्य पनि रोयल्टी छुटयाउँछु ।
क्यारिकेचर गर्न हँसाउने कलाकारले स्टेजको रोयल्टी दिन शुरु गर्दा गायक गायिकाहरुको प्रतिकृया कस्तो छ ?
हाम्रो हाँस्य कलाकाहरुको त रोयल्टी संकलन गर्ने सिएमओ छैन । अहिले मलाई केही पनि थाहा छैन । म आफू पनि कतै जोडिएको छैन । म दोहोरी प्रतिष्ठानमा भने छु । नेपालमा त यति सम्म भयो कि चर्चित गायकको गीत स्टेजमा गाउँदा उहाँहरुले मैले गाएको समेत भन्नु हुन्छ । चलेको शो मा आएकाहरु जस्तो शिव परियार पछाडी छ अगाडी गएर एउटा नयाँ भाईले उहाँ कै गीत गाईदिन्छ तर उसले एक चोटी पनि उहाँको नाम लिदैँन । गीतकार संगीतकारको नाम पनि लिदैन । व्यक्ति गत रुपमा पनि उहाँहरुलाई चेतना होस भन्ने मेरो चाहना पनि हो । यो बिषयमा गायक गायिकाको प्रतिकृया अझै पाएको छैन । मैले संकलन गरेको रोयल्टी मेरो जन्मदिनका अबसर पारेर सम्बन्धित कलाकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छु ।
‘हुर्रे’को ‘ठेकीमा दही’ सार्वजनिक
दुबईमा अवार्ड जितेकी नम्रताको नयाँ कार